यस्तो छ आज (शनिबार २०७६ पौष २५) को राशीफल -
२०७६, २६ पुष शनिबार ०४:०६ January 11, 2020 clickonLeaveaComment on यस्तो छ आज (शनिबार २०७६ पौष २५) को राशीफल
विनोदी आफन्तहरूको साथ पाएपछि तपाईंको तनाउ कम हुनेछ र तपाईंलाई धेरै आवश्यक परेको राहत पाउनुहुनेछ। तपाईं यस्ता आफन्तहरू पाएर भाग्यमानी हुनुहुन्छ। जवानहरू संलग्न भएका गतिविधिहरुमा संलग्न हुने राम्रो समय हो। रोमान्स सुखद र अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
शारीरिक पीडा र तनाउ सम्बन्धित समस्यालाई नकार्न सकिंदैन। दिनको उत्तरार्द्धमा तपाईं आराम गर्न र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। प्रियसँग क्यान्डी फ्लोस् र टफी बाँट्ने कार्डमा सम्भावना देखिन्छ। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
तपाईंले लामो समयदेखि अनुभव गरिरहेको जीवनका तनाउ र खिचलोबाट राहत प्राप्त गर्नु हुनेछ। यिनीहरूलाई स्थायी रूपमा निकाल्न तपाईंको जीवन शैली परिवर्तन गर्ने सही समय हो। आफ्नो परिवारको महानता र केही सार्थक काममा जोखिम लिनुहोस्। नडराउनुहोस्, किनभने छुटेको मौका कहिल्यै फिर्ता नआउन सक्छ। तपाईंले आफ्नो प्रेमीको एउटा नयाँ अद्भुत पक्ष देख्न पाउनु हुनेछ। आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
ध्यान र आत्म-बोध लाभदायी साबित हुनेछन्। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। तपाईंको प्रेम बहुमूल्य कुराहरू जस्तै ताजा राख्नुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ।
आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। आफ्नी पत्नीको उपलब्धि प्रशंसा गर्नुहोस् र उनको सफलता र सौभाग्यमा आनन्दित हुनुहोस्। आफ्नो कृतज्ञतामा उदार र निष्कपट हुनुहोस्। तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्। कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्।
तपाईं भावनात्मक रूपमा धेरै कमजोर हुनुहुनेछ – त्यसैले तपाईंलाई चोट पर्ने परिस्थितिबाट टाढा रहनुहोस्। बिरामी भएको आफ्नो आफन्त हेर्न जानुहोस्। तपाईंलाई आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्दा कठिनाई हुनेछ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। गलतफहमीको नराम्रो चरण पछि, साँझसम्ममा तपाईंको जोडीको प्रेम पाउनुहुनेछ।
आफुलाई एउटा सीमाबाट पर नपार्नुहोस् र उचित आराम लिनु पर्ने याद राख्नुहोस्। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
स्वास्थ्यको दृश्यबाट धेरै राम्रो दिन। तपाईंको हँसिलो मनले तपाईंको इच्छित बल दिन्छ र तपाईंलाई विश्वस्त राख्नेछ। आज तपाईंलाई प्रदान गरिएका लगानी योजनाहरुमा तपाईंले दुई पटक हेर्नुपर्छ। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। व्यक्तिगत मामिलाहरू नियन्त्रणमा हुनेछन्। बाहिरी मान्छेको हस्तक्षेपले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा रोकावट प्रदान गर्नेछ।
आफ्नो झगडालु व्यवहारले तपाईंलाई शत्रुको सूचीमा थप्नेछ। तपाईंलाई कसैले यति धेरै क्रोधित नबनाओस जसले गर्दा तपाईंले पछि पछताउनु पर्ने हुन्छ। तपाईंले आराम गर्नुपर्छ र घनिष्ठ मित्र र परिवारका सदस्यहरूसँग आनन्द मनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। आज आफ्नी प्रियतमासँग शिष्टतासाथ व्यवहार गर्नुहोस्। आज तपाईं आफ्नो जोडीसित आफ्नै तनाउको कारण झगडा गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा कुनै कारण हुँदैन।
तनाउलाई बेवास्ता गर्नु पर्दैन। यो तीव्र गतिमा सुर्ती र रक्सी झैं गम्भीर रूपमा एउटा महामारी बन्दैछ। तपाईं कामले साह्रै तनाउ दिएकोले परिवारका आवश्यकताहरू र खाँचाहरूलाई बिर्सिनु हुनेछ। तपाईंको कार्डमा तलाउमा सुन्दर बास भेट्ने सम्भावना उँचो छ। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ।
भुईंमा हिड्दा गर्भवती महिलाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एउटा घनिष्ट आफन्तलाई अझ बढी स्याहार चाहिन्छ तर उ सहयोगी र प्यारो हुनेछ। शरद ऋतुको रूख। आज, तपाईंका जोडीको स्वास्थ्यको कारणले केही तनाउयुक्त रहन सक्नु हुनेछ।
तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। पोस्टद्वारा आएको पत्रले सम्पूर्ण परिवारमा खुसीको समाचार ल्याउँछ। कठिन समयमा आफ्ना जीवनसाथीबाट सहायताको कमीले तपाईंमा निराशा आउनेछ।
मौसम – आजदेखि सफा हुँदै जाने
तपाईको (सोमबार जेष्ठ १९) को राशीफल
२०७७, १९ जेष्ठ सोमबार ००:२२ June 1, 2020 clickon
यस्तो छ आज (मंगललबार २०७६ पौष १) को राशीफल
२०७६, १ पुष मंगलवार ०९:५९ December 17, 2019 clickon